बद्री केसी समुहको एनआरएनए चुनाव : १५ पदाधिकारी निर्विरोध, नेतृत्वमा थापा र केसी
काठमाडौं । डाक्टर बद्री केसी समुहको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा १५ पदमा निर्विरोध भएको छ । आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय रविना थापा र डा. बद्री केसी बीच औपचारिक प्रतिस्पर्धा हुने छ । किनकी रविनालाई केसीकै समुहकै सहयोगि उमेदवारको रुपमा लिइएको छ ।
संघको निर्वाचन समितिले तोकेको समय सीमाभित्र अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यको समुहले मनोनयन नै दर्ता नगरे पछि यस्तो अवस्था आएको हो । कुल आचार्य समुह छुट्टै चुनावको तयारीमा छ ।
यस्तै महिला उपाध्यक्षमा साउदीबाट यासमिन बेगम सैयद र युवा उपाध्यक्षमा अफ्रिकाबाट रोशन थापा निर्विरोध चयन भएका छन् ।
महासचिव पदको लागि अमेरिकाका गौरीराज जोशी र बेलायतका विनय अधिकारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । जोशी डाक्टर बद्री केसी समुह र अधिकारी रविना थापा समुहका उमेदवार हुन् । महासचिवमा कुल आचार्य समुहबाट अमेरिकाका डाक्टर केशव पौडैलले उमेदवारीको प्रचार गरेका भए पनि चुनावमा सहभागि भएनन् ।
यस्तै खुला सचिवतर्फ बेलायतबाट रामशरण सिम्खडा, जापानबाट ओम गुरुङ, अष्ट्रेलियाबाट अभिमासिंह बस्नेत, अमेरिकाबाट शंकर खड्का र क्यानाडाबाट चिरन्जीवी घिमिरेको उम्मेद्वारी परेको छ । यीमध्येबाट तीन जना निर्वाचित भएर आउनेछन् ।
ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजकका लागि भने तीनजनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । न्युजिल्याण्डका लालबहादुर केसी तथा अष्टे्लियाका दिपक शर्मा र दिनेशराज जोशीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।
यस्तै क्षेत्रीय महिला उपसंयोजकमा इन्दिरा त्रिपाठी अमेरिकाज र डा. इन्दिरा तिवारी एसियामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै क्षेत्रीय युवा संयोजकमा किरण गुरुङ युरोप, स्वराज खाती क्षेत्रीय युवा संयोजक, दिपक प्रसाद कंडेल एसिया प्यासिफिक, रोजनराज घिमिरे अफ्रिका र प्रदीप रुपाखेतीले ओसेनिया युवा संयोजकमा निर्विरोध भए । संयोजकमा युरोपबाट रोबट लिम्बू र अमेरिका युवा उपसंयोजकमा ईश्वर खत्री निर्विरोध भएका छन् ।
संघको निर्वाचन आगामी २१ र २२ मार्चमा अनलाइनमार्फत हुँदै छ । आचार्य समुहको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि काठमाडौंमा जम्मा हुने क्रम शुरु भएको छ ।
एनआरएनएमा मैले यस कारण दिइन उमेदवारी : राजन त्रिपाठी, क्षेत्रिय संयोजक, अमेरिका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी नेताका अभिव्यक्तिले चुनावी गठबन्धन नै अन्याेलमा